Eksodho 2 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
2 Munguva iyi, mumwe murume weimba yaRevhi akawana mumwe mwanasikana waRevhi.+ 2 Mukadzi wacho akava nepamuviri, akabereka mwanakomana. Paakaona kunaka kwaakanga akaita, akaramba akamuvanza+ kwemwedzi mitatu.+ 3 Paakanga asingachakwanisi kumuvanza,+ akabva amutorera tswanda yenhokwe, akainama nebhitumini nenamo,+ akaisa mwana wacho mukati mayo, akaiisa pakati petsanga+ dzaiva pamahombekombe orwizi rwaNire. 4 Uyezve, hanzvadzi yake yakamira chinhambwe chakati, kuti ione kuti aizoitwei.+ 5 Kwapera nguva yakati, mwanasikana waFarao akaburuka, akaenda kunogeza muRwizi rwaNire, uye vashandikadzi vake vaifamba pedyo norutivi rwoRwizi rwaNire. Iye akaona tswanda iri pakati petsanga. Akabva atuma murandasikana wake kuti aitore.+ 6 Paakaivhura, akaona mwana, uye mukomana wacho aichema. Akamunzwira tsitsi,+ kunyange zvazvo akati: “Uyu ndomumwe wevana vevaHebheru.” 7 Hanzvadzi yake yakabva yati kumwanasikana waFarao: “Ndiende ndinokushevedzerai mukadzi anoyamwisa pavakadzi vechiHebheru kuti akurererei mwana wacho here?” 8 Naizvozvo mwanasikana waFarao akati kwaari: “Enda!” Musikana wacho akabva aenda, akashevedza amai vomwana wacho.+ 9 Mwanasikana waFarao akabva ati kwavari: “Enda nomwana uyu undirerere, uye ndichakupa mubayiro wako.”+ Naizvozvo mukadzi wacho akatora mwana wacho, akamurera. 10 Mwana wacho akakura. Akabva aenda naye kumwanasikana waFarao, zvokuti akava mwanakomana wake;+ uye akamutumidza kuti Mosesi uye akati: “Nokuti ndakamunyurura mumvura.”+ 11 Zvino pamazuva iwayo, Mosesi zvaakanga achiva nesimba, akaenda kuhama dzake kuti anoona mitoro yavakanga vachitakura;+ uye akaona imwe yehama dzake dzechiHebheru ichirohwa nomuIjipiti.+ 12 Naizvozvo akatarira-tarira akaona kuti kwakanga kusina munhu. Akabva auraya muIjipiti wacho, akamuviga mujecha.+ 13 Zvisinei, zuva rakatevera racho akaenda, akaona varume vaviri vechiHebheru vachirwisana. Naizvozvo akati kune akanga akanganisa: “Unorovereiko hama yako?”+ 14 Iye akati: “Ndiani akakugadza kuti uve muchinda nomutongi wedu?+ Uri kuda kundiuraya sokuuraya kwawakaita muIjipiti here?”+ Zvino Mosesi akatya akati: “Chokwadi chinhu chiya chazivikanwa!”+ 15 Naizvozvo Farao akazvinzwa, akaedza kuuraya Mosesi;+ asi Mosesi akatiza+ Farao kuti anogara munyika yeMidhiyani;+ uye akagara pedyo netsime. 16 Zvino mupristi+ weMidhiyani akanga aine vanasikana vanomwe, uye vakauya sezvavaigara vachiita, vakachera mvura, vakazadza maiiswa mvura, kuti vanwise makwai ababa vavo.+ 17 Vafudzi vakauya vakavadzinga sezvavaigara vachiita. Zvino Mosesi akasimuka, akabatsira vakadzi vacho, akanwisa makwai avo.+ 18 Naizvozvo pavakasvika kumba kwaiva nababa vavo Reueri,+ ivo vakati: “Sei makurumidza kwazvo kudzoka kumba nhasi?” 19 Ivo vakati: “Mumwe muIjipiti+ atinunura pamaoko evafudzi, uyezve, aticherera mvura kuti anwise makwai.” 20 Zvino vakati kuvanasikana vavo: “Asi ari kupi? Masiyirei murume wacho? Mushevedzei, kuti adye zvokudya.”+ 21 Pashure paizvozvo Mosesi akabvuma kugara nomurume wacho, iye akapa Mosesi mwanasikana wake Zipora.+ 22 Gare gare akabereka mwanakomana, akamutumidza kuti Geshomu,+ nokuti akati: “Ndiri mutorwa munyika yokumwe.”+ 23 Zvino mumazuva mazhinji iwayo mambo weIjipiti akazofa,+ asi vanakomana vaIsraeri vakaramba vachigomera nouranda uye vachichema vachinyunyuta,+ uye kuchemera kwavo kubatsirwa kwakaramba kuchikwira kuna Mwari wechokwadi nokuda kwouranda hwacho.+ 24 Kwapera nguva yakati, Mwari akanzwa+ kugomera kwavo,+ Mwari akayeuka sungano yake naAbrahamu, Isaka naJakobho.+ 25 Naizvozvo Mwari akatarira vanakomana vaIsraeri uye Mwari akavarangarira.